Maxay tahay Shuruudda Axmad Madoobe ee baajisay shirkii xalay ? - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Maxay tahay Shuruudda Axmad Madoobe ee baajisay shirkii xalay ?
Wararka laga helayo Villa Somalia, ayaa sheegaya in uu baaqaday kulan la filayay inay yeeshaan Madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha dowladd goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, oo lagu waday in Arbacadii xalay uu ka furmo Muqdisho.
Shuruud ka timid Madaxwaynaha Jubbaland Axmad Islaam Madoobe, oo soo jeediyay in dawaladda Federaal ahi ay gobolka Gedo ka saarto ciidammada ay geysay , ayaa lasheegay in ay noqotay cabaqad ilaa iyo hadda hortaagan in uu furmo wadda-hadalku.
Dedaal lagu rabo in laysugu soo dhaweeyo saddexda dhinac ee shirku ka dhexeeyo, ayaa lasheegayaa in ay ka socdaan magaalada Muqdisho.
Madawaxwaynaha Jubbaland, ayaa lagu soo warramayaa in wali aanu ka tanaasulin shardiga adag ee uu ku xidhay shirka, lamana oga go’aanka uu qaadanayo madaxwayne Farmaajo oo isagu qaba baahida ugu wayn ee ah in shirku uu bilaabmo.
Dhinacyada shirka ku ballansan, ayaa wada dhaq-dhaqaaqyo iyo wada-tashiyo uu dhinackastaa gaarkiisa isugu laabanayo.
Shalay, ayay aheyd markii Madaxweynaha Jubbaland iyo taliyaha Nabad Sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin ay magaalada Muqdisho kusheen kulan saacado badam qaatay oo ay uga hadlayeen arrinta Gobolka Gedo.
Sikastaba ha ahaato ee wali lama oga in shirku uu furmi doono saacadaha soosocda iyo in kale, laakiin jawiga ayaa u muuqda mid aad loo kala fogyahay.
Miyay kala fogaadeen iyana Farmaajo iyo Qoor-qoor ?
Puntland, oo siidaysay 6 nin oo dil loohaystay.
Shir u dhaxeeya dowlad Goboleedyada oo ka furmay Xerada Xalane